(src)="1.1"> အင် ​ တာ ​ နက် လွတ်လပ် ​ ခွင့် ကြေညာ ​ စာ ​ တမ်း
(src)="3.3"> ဒီနေ့အထိ အဲဒီကြေညာစာတမ်းကို အဖွဲ့အစည်းနဲ့ လုပ်ငန်းပေါင်း ၁၃၀၀ကျော်က လက်မှတ်ရေးထိုးပါဝင်ခဲ့ပြီး ဆက်ပြီးတော့လည်း လက်မှတ်ထိုးနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
(src)="6.2"> ၄င်း တို့သည် တိုက်ခိုက်ဆောင်ယူရန် ထိုက်တန်သည်ဟု ယုံကြည်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည် ။
(trg)="11.2"> Blockera inte nya teknologier och straffa inte uppfinnarna för deras användares handlingar .
(src)="1.2"> ဤအပုဒ်သည် မက္ကစီကို မူးယစ်ဆေးဝါးစစ်ပွဲအကြောင်း အထူးရေးသားမှု ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါသည် ။
(trg)="1.2"> Detta inlägg är en del av Global Voices specialbevakning av Kriget mot droger i Mexiko .
(src)="1.1"> ဆော်ဒီအမျိုးသမီးအာကစားသမားများ - အိုလံပစ်မှအပြန် တွစ်တာမုန်တိုင်းထန်
(trg)="1.1"> Saudiarabiska kvinnliga atleter - Från OS in i Twitter-stormen
(src)="1.2"> ဤအပုဒ်သည် ၂၀၁၂လန်ဒန်အိုလံပစ် အထူးရေးသားခြင်းအနက်မှ တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည် ။
(trg)="1.2"> Detta inlägg är del av vår specialbevakning Olympiska spelen i London 2012 .
(src)="5.1"> အောက်တွင်ဖော်ပြထားတာသည်မှာ ဆော်ဒီတွစ်တာအသုံးပြုသူတစ်ဦးက အားကစားသမားနှစ်ဦးစလုံးအတွက် ထောက်ခံအားပေးထားသော တွစ်တာစာတိုနမူနာများပင် ဖြစ်သည် ။
(trg)="5.1"> Nedan finns exempel på tweets till stöd för båda atleterna , tagna från saudiska Twitter :
(src)="8.1"> အလီ ခဒရာ ရေးသည်မှာ ၊
(trg)="7.1"> Ali Khadra skriver :
(src)="9.3"> မင်းလုပ်ခဲ့တာက ပိုပြီးကြီးကျယ်ပါတယ် ။
(trg)="7.3"> Vad ni gjorde är mycket mer värt .
(src)="9.4"> ကျေးဇူးတင်ပါတယ် # SaraAttar # Wejdan # Wijdan .
(trg)="7.4"> Tack # SaraAttar # Wejdan # Wijdan .
(src)="9.5"> ကျေးဇူး # KSA .
(trg)="7.5"> Tack # KSA .
(src)="9.7"> ဘဒါ အလ်ဂျီဟာနီက ဂုဏ်ယူစွာပြောသည်မှာ ၊
(src)="9.8"> @ BooDzJ ၊
(trg)="7.7"> Bader Aljehani kommenterar stolt :
(src)="9.9"> # SaraAttar ဆော်ဒီအားကစားအဖွဲ့မှာ ပါဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးထက်ပိုပြီး မင်းနဲ့ ဝိုဒန် အတွက် ငါတို့ဂုဏ်ယူပါတယ် ။
(trg)="7.9"> Sara Attar är en global trend # SaraAttar , skriver @ WordWizard på Twitter .
(src)="9.11"> # SaraAttar ။
(trg)="7.10"> Han delar även detta skärmdump
(src)="9.12"> တွစ်တာပေါ်က @ WordWizard ရေးထားခြင်းဖြစ်သည် ။
(trg)="8.1"> Och Nada Abu utfärdar ett löfte :
(src)="9.15"> @ NadaAbu တစ်နေ့မှာ ငါ့ကို တီဗွီဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ အောင်မြင်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ တွေ့ရစေမယ် ။
(trg)="8.2"> @ NadaAbu : Ni kommer att se mig på skärmen som vinnare en dag .
(src)="9.16"> စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
(trg)="8.3"> Tack för inspirationen # SaraAttar http : / / twitpic.com / agw7nn
(src)="11.3"> မဟုတ်ဘူးကွ ။
(trg)="11.2"> Stackars Wijdan !
(src)="16.4"> ဤအပုဒ်သည် ၂၀၁၂လန်ဒန်အိုလံပစ် အထူးရေးသားခြင်းအနက်မှ တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည် ။
(trg)="13.3"> Detta inlägg är del av vår specialbevakning Olympiska spelen i London 2012 .
(src)="1.1"> တောင် ​ ကို ​ ရီး ​ ယား ၊
(trg)="1.1"> Sydkorea : Kontroversiell klassificering av musikvideos
(src)="1.2"> အငြင်း ​ ပွား ​ ဖွယ် အွန် ​ လိုင်း ​ တေး ​ ဂီ ​ တ ​ ဗီ ​ ဒီ ​ ယို သတ် ​ မှတ်ချက် ​ စနစ် စတင်
(trg)="1.2"> Sydkoreanska myndigheter har lanserat ett nytt klassificeringssystem för musikvideos som laddas upp på webben .
(src)="1.3"> တောင်ကိုရီးယား အာဏာပိုင်များသည် အွန်လိုင်းတွင်တင်နေသော ဂီတဗီဒီယိုများအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်စနစ်အသစ်တစ်ခုကို စတင်လိုက်သည် ။
(trg)="1.3"> De nya bestämmelserna kräver att samtliga musikvideos ( eller reklamvideos ) och till och med filmtrailers klassificeras innan de laddas upp .
(src)="3.1"> အွန်လိုင်းနယ်ပယ်သို့ ချဲ့ထွင်လာသော ဆင်ဆာဖြတ်ခြင်း
(trg)="1.4"> Underlåtenhet att följa bestämmelserna kan leda till två års fängelse eller dyra böter .
(src)="5.3"> ထိုဥပဒေသည် အကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ၏ ဗီဒီယိုများနှင့် အမျိုးမျိုးသော ဂီတနှင့် ဗီဒီယိုအတိုကားငယ်များအတွက်ပင် အကျုံးဝင်သည် ။
(trg)="2.1"> Artister och sydkoreanska nätanvändare kallar den en ny form av förstärkt censur av kulturellt innehåll och ett steg tillbaka för yttrandefriheten .
(src)="7.1"> ဆင်ဆာဖြတ်ခြင်းကို ဖော်ပြထားသော ဓာတ်ပုံ ၊
(trg)="3.1"> Censuren omfattar även plattformar på webben
(src)="8.1"> တေးဂီတ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးနယ်ပယ်တွင် အလုပ်လုပ်နေပြီး အသက် ( ၂၈ ) ရှိပြီးဟု မိမိကိုယ်ကိုယ်ဖော်ပြထားသော အင်တာနက် အသုံးပြုသူတစ်ဦးက သတ်မှတ်ချက်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်သော အွန်လိုင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည် ။
(trg)="5.1"> Tidigare hade enbart TV-stationer ansvar för att sända musikvideos , men de nya bestämmelserna utvidgar censuren till att även omfatta videoklipp som publicerats på online-plattformar , inklusive YouTube , bloggar och anslagstavlor på webben .
(src)="1.1"> မ ​ ဒ ​ ဂါ ​ စကား ​ မှာ လည် ​ ချင် ​ တာ ​ လား
(trg)="1.1"> Tufft att ta sig runt på Madagaskar
(trg)="1.2"> Kollektivtrafiken kan vara en riktig utmaning för nykomlingar i Madagaskar och detta av många anledningar .
(src)="1.4"> ရထား ​ လမ်း ​ ကို တိုး ​ ချဲ့ ​ ဖောက် ​ ထွင် ​ နေသော် ​ လည်း မြို့ ​ အများ ​ စု ​ သို့ လမ်းမ ​ ပေါက် ​ သေး ​ ပေ ။
(trg)="1.3"> Med tanke på landets storlek , 590 000 kvadratkilometer , är vägarna föråldrade och outvecklade .
(src)="2.1"> မြို့ ​ လယ် ​ ခေါင် ​ နေရာ ​ များ ​ တွင် ​ မူ အများ ​ ပြည် ​ သူ ​ သုံး ​ ယာဉ် ​ များ ​ ဟူ ၍ အလွန်အမင်း ​ ပြည့် ​ ကျပ် ​ နေ ​ သော ဘတ် ( စ် ) ကား ​ များ ​ နှင့် ဗဲန် ​ ကား ​ အသေး ​ စား ​ များ ​ သာ ​ ရှိ ​ ပြီး မြို့တွင်း ​ ရထား ​ လမ်း ​ မှာ မြို့တော် ​ ဖြစ် ​ သော အန် ​ တာ ​ နာနာ ​ ရီ ​ ဗို ​ တွင် ​ သာ ဆက် ​ ဖောက် ​ နေ ​ သည် ။
(trg)="1.4"> Järnvägssystemet utvidgas men är fortfarande otillgängligt i de flesta städer .
(trg)="2.1"> I stadskärnorna är kollektivtrafiken begränsad till överfulla bussar och minibussar och järnvägstrafik inom städer är uteslutande ett projekt för huvudstaden Antananarivo .
(trg)="3.1"> Kollektivtrafiken är ett välkänt problem i huvudstaden , som rymmer nära två miljoner invånare och cirka 110 000 bilar .
(trg)="6.1"> Den här typen av trängsel är så outhärdlig för invånarna att Antananarivos regering ser över möjligheten att installera ett linbanesystem mellan två av stadens mest tätbefolkade kullar :
(trg)="6.3"> Men borgmästaren måste först kunna visa upp detaljer för hur projektet ska ta fart och hur mycket det kommer kosta .
(src)="6.10"> မ ​ ဒ ​ ဂါ ​ စကား ​ ရှိ အများ ​ ပြည် ​ သူ ​ သုံး ​ ယာဉ် ​ စနစ်
(trg)="6.4"> När det gäller valet av linbana kommer huvudstaden hämta inspiration från systemet som utvecklats i La Paz .
(src)="7.1"> အကယ် ၍ ယာဉ် ​ ကြော ​ ပိတ် ​ ဆို့ ​ မှု ​ သည် မြို့တော် ​ များ ​ ရှိ အဓိက ပြဿနာ ​ ဖြစ် ​ နေ ​ လျှင် ပြည်နယ် ​ ဆက် ​ သွယ် ​ လမ်း ​ များ ​ ကို ​ လည်း အကြီး ​ စား ​ ပြင်ဆင် ​ မှု ​ များ လုပ် ​ ရန် လို ​ အပ် ​ နေ ​ ပေ ​ သည် ။
(trg)="6.5"> Med tanke på kostnaden för ett sådant projekt ( uppskattat till 1,5 miljarder kronor för La Paz-banan ) samt den skenande fattigdomen i staden är det många som undrar om projektet är lämpligt .
(src)="7.4"> လာ ⁠ လာ ​ န ( မာ ​ လ ​ ဂါ ​ စီ ​ စကား ​ တွင် လမ်း ​ ဟု အဓိပ္ပာယ် ​ ရ ​ သည် ) ဟူ ​ သည့် အစိုးရ ​ မဟုတ် ​ သည့် အဖွဲ့ ​ အစည်း ​ က မဒဂါစကား တို ​ အာမာ ​ စီ ​ နာ ​ ၏ အဓိက ​ ဆိပ်ကမ်း ​ နှင့် မြို့တော် ​ တို့ ​ အား ဆက် ​ သွယ် ​ ထား ​ ပေး ​ သည့် RN2 အဝေး ​ ပြေး ​ လမ်းမ ​ ၏ အခြေအနေ ​ ကို သတိပေး ​ ပြော ​ ကြား ​ ခဲ့ ​ သည် ။
(trg)="6.7"> Snarare än att planera byggandet av ett linbanesystem , borde vi inte börja med att städa upp i slumområdena , förflytta dessa människor till platser som ligger mer i linje med mänsklig värdighet , ge dem sjukvård och utbilda deras barn ?
(trg)="7.1"> Även om trängsel är det största problemet inne i städerna så är de nationella vägarna också i behov av omfattande underhållsarbeten .
(trg)="7.3"> Vägar på 11 700 kilometer över hela Madagaskar måste repareras inom de närmaste sex månaderna UTO kommer ansvara för de vägar som är i behov av brådskande reparation samt tillfälliga reparationer av vägar som skadats av naturkatastrofer .
(src)="7.9"> အဲ ​ ဒီ ​ လမ်း ​ ရဲ့ တချို့ ​ အပိုင်း ​ တွေ ​ က ရေ ​ ကြီး ​ တုန်း ​ က ပါသွား ​ ခဲ့ ​ သေး ​ တယ် ။
(trg)="7.4"> Organisationen Lalana ( ” Vägar ” på madagassiska ) uppmärksammade läsarna på tillståndet för RN2-vägen genom att koppla samman huvudstaden med den största hamnen i staden Toamasina :
(src)="7.10"> မ ​ ဒ ​ ဂါ ​ စကား ​ ရှိ အမျိုးသား ​ လမ်းမ ​ ပ ​ ေါ် ​ မှ " ကျေးလက် ​ သုံး အငှား ​ ယာဉ် " ။
(trg)="7.7"> Skadorna från de orkaner som slog mot landet förra året har fortfarande inte åtgärdats .
(trg)="7.10"> “ Landsbygdstaxi " på landsvägarna i Madagaskar .
(trg)="7.11"> Via Tana News .
(trg)="8.4"> Väl på plats i en stad kan man resa med ” pousse pousse ” , det lokala namnet på rickshaw , se följande video :
(trg)="9.1"> Ariniaina , en Global Voices-skribent i Madagaskar , poängterar att man har ändrat lagstiftningen i Madagaskar när det gäller rickshaws , men att det fortfarande är ett viktigt transportmedel för många lokalinvånare :
(trg)="9.2"> Rickshaw som transportmedel , dragen av en människa , anses vara en kränkning av mänskliga rättigheter .
(trg)="9.3"> Så kommunen i Antsirabe , Madagaskars näst största stad , lanserade ” cyclopousse ” - en cykeldriven rickshaw .
(src)="9.6"> ခွင့် ​ ပြု ​ ချက် ​ ဖြင့် သုံး ​ ထား ​ သည် ။
(trg)="9.5"> Ariniana som poserar tillsammans med en rickshawägare och hans rickshaw i Antsirabe , Madagascar .
(src)="10.1"> အများ ​ ပြည် ​ သူ ​ သုံး ​ ယာဉ် ​ စနစ် ​ သည် အတိုးတက် ​ မြန် ​ လွန်း ​ သော မာ ​ လ ​ ဂါ ​ စီ လူ ​ ဦး ​ ရ ​ အေား အမီလိုက် ​ နိုင် ​ ရန် ကြိုးပမ်း ​ နေ ​ သည် ။
(trg)="10.1"> Kollektivtrafiken försöker hinna i kapp den snabbväxande befolkningen i Madagaskar , men med tanke på de stora ekonomiska hindren förväntas det inte kunna ske – åtminstone inte på ett tag .
(src)="6.5"> မိမိကိုယ်ကို ဖော်ပြခြင်း ၊
(trg)="8.1"> Dansk-norsk-fransk miniatyrordbok av Tomasz Sienicki ( CC-SA-3.0 )
(src)="8.1"> နည်းပညာသည် အချိန် နှင့် နေရာကို အမှုမထားပဲ သင်ယူသူများကို ဘာသာစကားဆရာများနှင့် အကြောင်းအရာများဖြင့် ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည် ။
(trg)="9.5"> Den kan föra samman lärare och elever för språkinlärning - enkelriktad eller i tandem .
(src)="8.4"> ကစားနည်းများဖြင့် သော်၄င်း ၊
(trg)="12.1"> Europa Det norska nordsamiska språket har programmerats in i nedladdningsbara ordböcker .
(src)="8.5"> cloud-based downloads များပြုလုပ် ၍ သော်၄င်း ၊
(trg)="14.2"> Gamla berättelser spelas in på Malis inhemska språk .
(src)="8.6"> apps များပြုလုပ် ၍ သော၄င်း လွတ်လပ်သော သင်ယူမှုကို လွယ်ကူချောမွေ့ စေနိုင်သည် ။
(trg)="14.3"> Ett företag för språkinlärning på nätet erbjuder en kurs i visselspråket från de spanska Kanarieöarna .
(src)="8.7"> နည်းပညာသည် ဆရာများ နှင့် သင်ယူသူများကို ဘာသာစကားသင်ယူရာတွင် တစ်လမ်းသွား သို့မဟုတ် တွဲဖက်ပုံစံမျိုးဖြင့် ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည် ။
(trg)="16.1"> Asien Ett program för digitalt historieberättande omfattar nu några av de olika minoritetsspråken som finns i Kina .
(src)="1.4"> ဓါတ်ပုံ - နာအိုမီ ဂျင်ဂိုးလ်ဒ် ( Public Radio International PRI ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အသုံးပြုသည် ။
(trg)="1.2"> Mästerbryggare - eller toji - Emi Machida på det 130 år gamla Machida-bryggeriet i Gunma , Japan .
(src)="2.2"> org တွင် ၂၀၁၅ စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့က စတင် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဤဆိုဒ်တွင် သတင်းမျှဝေမှု သဘောတူညီချက်ဖြင့် ပြန်လည်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည် ။
(trg)="2.1"> Denna artikel samt radioreportaget av Naomi Gingold för The World publicerades ursprungligen på PRI.org den 11 september , 2015 , och återpubliceras här tack vare en överenskommelse om innehållsdelning .
(src)="7.1"> ဂျပန်နိုင်ငံ ဂွမ်မာဒေသရှိ မာရှီဒါ အရက်ချက်ရုံမှ ၀ါရင့်အရက်ချက်သူ ( သို့ ) တိုဂျိ အိမိ မာရှီဒါ က `ဆက်လက် လည်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ချက်လုပ်တဲ့ အရက်ချက်ရုံတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
(trg)="6.2"> Antalet människor som dricker saké har minskat , antalet sakebryggerier i Japan har gått ner till ca hälften jämfört med 1970-talet och mästerbryggarna blir allt äldre och är ofta ovilliga att ändra sina vanor för att nå nya eller yngre kunder .
(src)="7.2"> ကိုယ်အမှန်တစ်ကယ် ချက်လုပ်ချင်ပြီး သောက်သုံးချင်တဲ့ ဆာကေးကို ချက်ကြမယ် ဆိုပြီးတော့ပေါ့ ။
(trg)="7.2"> Så för 10 år sedan slutade vi att använda systemet med migrerande bryggare . ”
(src)="9.1"> မာရှီဒါသည် အရှိန်မြှင့်လာနေသော ဂျပန်နိုင်ငံ ၏ ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ချက်လုုပ်သည့် အရက်ချက်ရုံများ လှုပ်ရှားမှုတွင် ရှေ့တန်းမှ ရပ်တည်နေသည် ။
(trg)="9.2"> Men Machida är också ovanlig , eftersom hon tillhör en mycket liten grupp av kvinnliga tojis inom vad som länge varit en värld öppen endast för män .
(src)="10.1"> ရှေးခေတ်ကာလများတုန်းက ဆာကေးချက်လုပ်ခြင်းသည် အမှန်တကယ်တွင် အမျိုးသမီးများ ၏ လက်မှုပညာတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု တစ်ချို့ကပြောကြသည် ။
(trg)="13.1"> Saké används ofta vid religösa ritualer i Japan och Machida-bryggeriet , liksom de flesta andra sakébryggerier , välsignas av en Shinto-präst och dekoreras med heliga Shinto-rep .
(src)="11.2"> ဓါတ်ပုံ - နာအိုမီ ဂျင်ဂိုးလ်ဒ် ( Public Radio International PRI ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အသုုံးပြုသည် ။
(trg)="14.1"> Under sin uppväxttid föreställde sig Machida aldrig att hon skulle bli sakébryggare .
(src)="15.1"> သူမ တိုဂျိ အဖြစ် စတင်လုပ်ဆောင်စဉ်က ချောချောမွေ့မွေ့တော့ မဟုတ်ခဲ့ပါ ။
(trg)="16.1"> När hon började arbeta som toji gick saker och ting inte alltid smidigt .
(src)="16.2"> ကျွန်မခိုင်းတဲ့အတိုင်း ဘယ်တော့မှ ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး` ဟု သူမက ပြောပြသည်။
(trg)="16.2"> Alla hennes anställda var män och de ville inte lyssna på henne .
(src)="17.1"> ၀ါရင့်မဟုတ်သော ၊
(trg)="17.2"> Ingenting blev som jag planerat , ” säger hon .
(src)="18.3"> သူမအရင် တိုဂျိလက်ထက်က ဤအဖြစ်မျိုး လုံးဝ မရှိခဲ့ပါ ။
(trg)="19.1"> Men nu får hon inte höra detta längre .
(src)="20.2"> မည်သည့်ရေမျိုးကို အသုံးပြုသည် ၊
(trg)="19.3"> Detta inträffade aldrig under den förre tojins tid .
(src)="20.3"> အပူချိန်ကို ဘယ်နှစ်ကြိမ်နှင့် ဘယ်အဆင့် ( သို့ ) အသေးစိတ်အဆင့်များတွင် ညှိသည် စသဖြင့် အားလုံး အကျုံးဝင်သည် ။
(trg)="20.1"> Arbetet med att tillverka saké inleds med att risets yttersta lager poleras bort ; hur mycket som tas bort är nyckeln till hur högkvalitativ sakén blir .
(src)="23.1"> ခါးကျိုးအောင်လုပ်ရသည့် အလုပ်များပင်ဖြစ်တော့သည် ။
(trg)="22.1"> Det tar ca 45 dagar att framställa ett fat saké .
(src)="24.1"> ဤအရက်ချက်ခြင်း အနုပညာကို လေ့လာသင်ယူရန် မာရှိဒါသည် သက်ကြီး အရက်ချက်သူများထံမှနှင့် စာအုပ်စာပေများထဲမှ သင်ယူ လေ့လာခဲ့သည် ။
(trg)="25.1"> Hon respekterar de gamla traditionerna men tycker även att det är viktigt att experimentera för att finna nya tillvägagångssätt .
(src)="26.1"> အခြား တိုဂျိများနှင့်အတူ လစဉ် လေ့လာဆွေးနွေးပွဲများသို့ သူမသွားရောက်လေ့ရှိပြီး `ကူရာ ဂျိုစေ နိုကိုင်` ဟုခေါ်သော အမျိုးသမီးများ၏ ဆာကေးအဖွဲ့တွင်လည်း ပါ၀င်ထားသည်။
(trg)="28.1"> Kvinnliga tojis - mästerbryggare - på 2014 års " Kura Josei Summit " för japanska kvinnor inom sakéindustrin .
(src)="28.2"> ဂျပန် အမျိုးသမီး ၏ ဆာကေး အဖွဲ့ တွင် တွေ့ရစဉ် ။
(trg)="28.2"> Foto : Med tack till Kura Josei No Kai .
(src)="28.3"> ဓါတ်ပုံ - ဂျပန် အမျိုးသမီးများ ၏ ဆာကေးအဖွဲ့ ( Public Radio International PRI ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အသုံးပြုသည် ။
(trg)="29.2"> Hon insåg att hon inte var ensam och att de övriga brottades med samma problem .
(src)="30.1"> ဤ ဆာကေးစီးပွားရေးလောကမျိုးတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဖြစ်ရခြင်းသည်လည်း အကျိုးရှိနိုင်ပါသည်ဟု သူမက ထောက်ပြသည် ။
(trg)="31.1"> Hon påpekar att det även har sina fördelar att vara kvinna inom industrin .
(src)="30.4"> တစ်ခါတစ်ရံတွင် သက်ကြီး အမျိုးသား အရက်ချက်သူများက သူမတို့ကို ပို ၍ သင်ကြားပေးလိုကြသည် ။
(trg)="32.1"> Men det viktigaste av allt är att Machida nu får respekt för den utsökta saké hon brygger .
(src)="32.1"> ဟုတ်ပါသည် ။
(trg)="33.1"> Ja , det förstås ...
(src)="32.2"> ဤဆောင်းပါးမှတစ်ဆင့် သူမ ၏ ဆာကေးအား သင်အရသာမခံနိုင်သည်မှာ ၀မ်းနည်းစရာတော့ ဖြစ်သည် ။
(trg)="33.2"> Tyvärr kan du inte smaka på Machidas saké via det här nyhetsinslaget .
(src)="32.3"> သို့သော် တိုကျိုနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ ဒေသ အတော်များများတွင် သူမ ၏ ဆာကေးကို သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည် ။
(trg)="33.3"> Men du kan köpa den i Tokyo , på de flesta platser i övriga Japan och kanske kommer hon även att sälja den utomlands i framtiden .
(src)="33.1">`အဲ့ဒါ ကျွန်မရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်ပဲ` ဟု သူမက ပြောသည်။
(trg)="34.1"> ” Det är något av en dröm ” , säger hon .